सुरेन्द्र पाण्डेमाथि अभद्र व्यवहार : प्रचण्ड–नेपाल समूहद्वारा विरोध, ओली समूह मौन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि चितवनस्थित आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अभद्र व्यवहार भएको छ । शनिबार नेकपा राप्ती नगरको बैठकमा सहभागी हुँदै गर्दा युवाहरुको एक समूहले उनीविरुद्ध नाराबाजी र अभद्र व्यवहार गरेका हुन् । पार्टीको सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दैगर्दा कार्यक्रम हलमै रहेको कार्यकर्ताले चर्को नाराबाजीसहित उनीमाथि अभद्र व्यवहार भएको बताइएको छ । सो प्रकरणबारे सार्वजनिक भिडियोमा युवाहरुको एक समूहले ‘पार्टी एकता जिन्दावाद, गुटबन्दी गर्न पाइँदैन’ लगायतका नाराबाजी गर्दै होहल्ला गरेको सुन्न सकिन्छ ।
सो होहल्ला अघि पाण्डेले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै ओलीको व्यक्तिवाद नसच्चिए पार्टी समाप्त हुने चेतावनी दिएका थिए । पार्टीको निर्णय नमान्ने, एकलौटी ढंगले सरकार चलाउन खोज्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले नेकपा कमजोर बनेको उनको दावी थियो ।
पाण्डेको अभिव्यक्ति पार्टी एकताको माहौललाई थप बिगार्ने गरी आएकाले प्रतिवाद गर्नु परेको नाराबाजीमा उत्रिएका कार्यकर्ताहरूले दावी गरेका छन् । कार्यकर्ताको चर्को होहल्ला र अभद्र व्यवहारपछि पाण्डे कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।
ओली समूह मौन, इतर समूहद्वारा चर्को विरोध !
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहबीच चर्को अन्तरविरोध रहेको छ । सो अन्तरविरोध कात्तिक २८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा छुट्टै प्रस्ताव ल्याएको पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीविरुद्ध आरोपको पोको खोलेपछि थप छताछुल्ल बनेको अवस्था छ । सो प्रस्तावपछि पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको भनिएको बेला विवाद मिलाउने प्रयास जारी छ। सोही क्रममा नेकपाको मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले ओलीले पनि छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने र त्यसका लागि १० दिन समय दिइएको छ । जसअनुसार मंसिर १३ गते ओलीले छुट्टै प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने गरी तत्कालका लागि ‘युद्धविराम’ जस्तो देखिएपनि आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जारी रहेको हो । जुन चितवनमा पाण्डेको अभिव्यक्ति र ओली निकट भनिएका कार्यकर्ताको प्रतिवादपछि उत्पन्न परिस्थितिले प्रस्ट्याएको छ । पाण्डे वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट मानिन्छन् ।
पाण्डेमाथि भएको दुर्व्यवहारपछि ओली समूहले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । तर, नेपाल र प्रचण्ड समूहले समेत घटनाको चर्को विरोध गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।
वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले विज्ञप्ति मार्फत नै घटनाको विरोध गरेका छन् । यस्तै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले घटनालाई सुनियोजित नै भएको बताएका छन् ।
उनले यस प्रकारको व्यवहारलाई प्रोत्साहित गरेर कसैको हित नगर्ने भन्दै ट्वीटरमार्फत घटनाको निन्दा गरेका छन् ।
सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको दुर्व्यवहार सुनियोजितः नारायणकाजी श्रेष्ठ
यसैगरी स्थायी समिति सदस्य तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि घटनाको विरोध गरेका छन् । यसैगरी केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेल, रामकुमार झाँक्री, विष्णु रिजाल, ठाकुर गैरे लगायतले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको विरोध गरेका छन् ।
नेकपा नेता माननीय सुरेन्द्र पाण्डे प्रति आज चितवनमा दुर्ब्याबहार भएको छ।यस्तो कार्यलाइ प्रोत्साहन नगरौ।कतै दोहोरिन नदिउ।पार्टी एकता कायम राख्न आ आफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान गरौ। बहस लाइ मर्यादित बनाउ।
— ठाकुर गैरे (@Tpgaire) November 21, 2020
नेतृत्वको सम्पूर्ण रूपमा यो भन्दा असफल हुने ठाउ छैन।असफल नेतृत्वलाई विस्थापन गर्न पनि विधि मै जानुपर्छ।
यो चुनौतिको सामना गरौं!
— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) November 18, 2020
नेकपा स्थायी समितिका सदस्य, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि आज चितवनको राप्ति नगर पालिकाकाे कार्यक्रममा बोलिरहेको बेला केही मानिसहरुले हुलहुज्जत गरी निकृष्ट ब्यवहार गरेका छन् । यस्ता मानिसहरु जुनसुकै आवरणमा भए पनि पार्टी र लोकतन्त्र विरोधी हुन् । यस्तो कृयाकलाप अशोभनीय छ ।
— Dr. Vijay Poudel (@drvijaypou) November 21, 2020
प्रचण्डलाई ओलीको सुझाव– ‘मुद्दा हाल्न पाइन्छ, तर अदा...
सोमवार थप ३ सय ३९ जनामा कोरोना संक्रमण, १० संक्रम...